Ukusesha ku-Inthanethi - Ukuba ngumlutha ku-intanethi kungabonakala ubuso obuningi
Ukusesha ku-intanethi | I-Internet ye-Media
Izimpawu nezizathu zokulutha kwe-intanethi
Ungaphatha kanjani umlutha we-intanethi?
Ingabe ingane yami i-inthanethi iyilutha?
Ingabe ukuthengwa kwe-inthanethi kuyatholakala? Empeleni, abantu bangaba umlutha wazo zonke izinto ababhekana nazo ekuphileni kwabo kwansuku zonke. Kusukela kuthelevishini nakusuka kotshwala, ugwayi noma ukudla. Yebo, kusukela eminyakeni yobudala ye-inthanethi, futhi.
Ukulutha umlutha kubonakala njalo ngokuthi umlutha awukwazi ukuhlala ngaphandle kwemithi yezinambuzane, kulokhu ku-inthanethi. Le milutha yokuthola inthanethi ingaba nobuso obuningi futhi ihlukile kubafana namantombazane. Omunye wabasebenzisi abasebenzisa i-intanethi namuhla kuthiwa uthintekile yilo mlutha. Phakathi naleso sikhathi, ukubheja ngokweqile ku-intanethi kubonakala ngokomzimba njengesifo.
Ukufaniswa kocansi e-inthanethi
Kuye ngokuthi yisiphi isizathu se-addiction online, ezinye izinto zokuziphatha ziphambili. Nokho, iqiniso liwukuthi ubulili besilisa buvame ukubuswa ngokudlala ngokweqile kwe-intanethi.
Kungakhathaliseki ukuthi imidlalo yengozi noma impi ayibalulekile lapha, ingaphezu komlingiswa owedlulele wokudlala kukhompyutha.
Abesifazane namantombazane banamathuba amaningi okuba ngamaforamu ngaso sonke isikhathi, ukwabelana ngamapulatifomu nokuxoxa ngaphandle kokuyeka. Ikhompiyutha isebenza ngehora, akukho lutho olusebenza ngaphandle kwalo.
Yiqiniso, umehluko phakathi yokulutheka kanye ukusetshenziswa njalo kuthiwa ekuqaleni egeleza, ngaleyo ndlela ungakwazi ukuluthwa inthanethi futhi neze ohlonishwa kanjalo. Yize kunjalo, uma njalo iyavuka ihlale ebusuku kukhompyutha, olalayo kancane, eliqala ukuthatha ukudla yakhe ngaleso computer, abaye bangakunaka abangani uyahoxa ezingasho ukuphila emhlabeni virtual, kunokuba empeleni engase inthanethi umlutha noma engozini yokuba khona.
Imidiya yokufunda - ukuphatha ama-smartphone namakhompyutha
Ukukhathazeka ngokomzimba kuletha umlutha we-intanethi nayo. Ngaphezu kwezinkinga zamehlo kungabuye kubuye ubuhlungu nokuhlupha okwenzeka, okubangelwa ukuhlala abaningi. Ukunakekelwa komzimba kunakekelwa kakhulu njengamanye okulutha. Lokhu kungahamba ngisho nokungahoxiswanga.
Ngokuyinhloko ngemuva komlutha we-intanethi ingenye isifo sengqondo, ngoba ukulutha kwe-inthanethi akuyona isifo esizimele. Online ukuluthwa ivame ukuhlotshaniswa izimpawu futhi bacindezeleke, yokukhathazeka nakwezinye iziyaluyalu ubuntu, kuyinto kunjengokungathi uphawu salezi zifo.
Iqiniso libonakala liqinisekile, izwe elilodwa kuphela elinikeza ukuphepha. Ukuzihlonipha kwezidakamizwa ze-intanethi, njengalezo ezinye izilonda, ngokuvamile kuvuthaka. Uma ikhompyutha ivaliwe, noma ingakwazi ukusebenzisa i-intanethi, izimpawu ezifana nokucasula, ukuphumula nokucindezeleka kubonakala.
Njengazo zonke ezinye izidakamizwa, ukwamukelwa kokulutha kwemithi kuqala.
Ukulutha umlutha kubantu abadala
Ingabe lo mkhuba inthanethi kanye waqaphela futhi wavuma, ngokuvamile eziwusizo esazini ukuphenya ngembangela yokuba umlutha weqiniso, okungukuthi, amanga omunye iziyaluyalu eziphawulwe ngenhla okunzima engqondo ngaphambi.
Uma lokhu kuphathwa, umlutha we-inthanethi uthatha isihlalo sokubuyela emuva. Isiguli kumele siqaphele ukuthi i-intanethi ayikwazi ukuxazulula izinkinga zayo.
Ekuqaleni, kusiza nokusika isikhathi se-intanethi ngesinyathelo ngesinyathelo ukwenza izinto zansuku zonke: ukulima, ukuhamba, ukudla ngaphandle, ukuhlangana nabangane.
Lokhu kuziphatha okujwayelekile kufanele kufundwe ngokoqobo. Amaqembu okuzisiza angasiza kakhulu ngalesi sikhathi nangaphezulu.
Kungakhathaliseki ukuthi ingane yakho ithintekile yilo mlutha ingabonwa yizimpawu ezingenhla, okungenani kungenziwa ukuthi ngabe kukhona ingozi. Qaphela futhi uqaphele izikhathi ingane yakho echitha kwi-intanethi. Lokho kuphela kunenjongo.
Uma unenkinga, i-aphoyintimenti nomchwepheshe ingasiza. Ngaphezu kwalokho, kufanele ngokuqinisekile ulawule ukusetshenziswa futhi uqinisekise ukuthi ingane yakho yenza imidlalo futhi iningi leontanga ndawonye, ​​yebo, ngaphandle kwe-Inthanethi ukuyisebenzisa! Noma ubani onomphakathi wokuphila ojabulisayo akavamile ukuba ngumlutha!
Ukuhlukunyezwa kwe-Cyberbullying | I-Internet ye-Media
Imidiya - I-intanethi ye-smartphone Amabhuku
Kungani izincwadi zezingane? | Izincwadi zokuxhumana
Ikhompyutha ne-Inthanethi yabaqalayo
Imishini yokucinga yengane | Izingane ku-intanethi